The show must go green - Goethe-Institut
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းပြီး ပိုမိုကြာရှည်တည်တံ့သော လူနေမှုပုံစံတစ်မျိုးကို နှိုးဆော်ထားသည့် မြောက်များစွာသော ဖျော်ဖြေရေး ရုံတင်ရုပ်ရှင်များနှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များရှိပါသည်။ သို့သော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်လုပ်ရေးကဏ္ဍထဲတွင် အခြေအနေကမည်သို့ရှိပါသလဲ။ ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက မည်မျှလောက်ထိ စိမ်းလန်းပါသလဲ။
ရေးသားသူ​ Lucas Barwenczik
Davis Guggenheim နှင့် Al Gore တို့၏ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "Eine unbequeme Wahrheit" ( သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့ အမှန်တရား ) သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်လွှားအောင်မြင်မှုရရှိပြီးကတည်းကပင် ဖျော်ဖြေရေးရုပ်ရှင်များ နဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များသည် "ရေရှည်တည်တံမှု" ခေါင်းစဉ် နဲ့ ပို၍ပို၍ နှီးနွှယ်လာကြသည်။ မကြာသေးမီကအချိန်ထိ သမိုင်းတလျှောက် အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် ဒါရိုက်တာ James Cameron ၏ Avatar ရုပ်ရှင် ကဲ့သို့သော Blockbuster ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များသည် ဂေဟစနစ်နဲ့ အက်ရှင်ဖျော်ဖြေရေးကို တွဲစပ်ထားပါသည်။ Zeit für Utopien ( စိတ်ကူးယဉ်အတွေး တွေးချိန် ) ၊ Die grüne Lüge ( အစိမ်းရောင် မုသား ) ၊ Taste the Waste ( စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ကို မြည်စမ်းခြင်း ) ကဲ့သို့သော မရေမတွက်နိုင်သည့် ဂျာမန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုများသည်လည်း ဘဝနေထိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ပုံစံတစ်ခုအတွက် အငြင်းပွားနေကြသည်။သို့သော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးပညာပေးပါဝင်သည့် ဖျော်‌ဖြေရေးရုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် ဝိရောဓိတစ်ခု အမြဲရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်စေမည့် လူနေမှုပုံစံကို တိုက်တွန်းထားသော ရုပ်ရှင်များကို ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး လျှစ်စစ်အသုံးကြမ်းသည့် နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ရသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သည် မကြာခဏဆိုသလို ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းလောက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့် သွားလာနေရပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတောင်ပုံရာပုံ စွန့်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါက မည်ကဲ့သို့ ဆက်စပ်နေပါသလဲ။
"ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်များဟာ ပိုမို စိမ်းလန်းလာပါတယ်။ " ဟု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး Monika Gütter က ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်ဌာနများ၊ ရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ကြာရှည်တည်တံ‌သော ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ပူးတွဲကြေငြာချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ရုပ်သံလိုင်း ZDF နှင့် RTL မှ ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ Netflix နှင့် Sky အထိ လက်မှတ်ရေးထိုးသူများသည် အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုနှင့် အခြား ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချရန် ကတိကဝတ်ပြုကြပါသည်။ ဤတွင် အထူးသဖြင့် အနာဂတ်ကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုရန်ပုံငွေအက်ဥပဒေကို ဆက်လက်ပြင်ဆင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့မှု သည် အဖွဲ့အစည်းရန်ပုံငွေစံသတ်မှတ်ချက် ကို ပိုမို‌ခိုင်မာလာနိုင်စေပါသည်။
ရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ဖက်ဒရယ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး Monika Grütters | Foto (Detail): © picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm ရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းများက ရည်မှန်းချက်များကို မီဒီယာအားထိထိရောက်ရောက်မကြေငြာခင် လမ်းညွှန်ချက်ဘောင်များအတွင်း အစိမ်းရောင်စံသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားခဲ့ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများက ကိုယ်ပိုင်ကြာရှည်တည်တံရေးဗျူဟာများထားရှိခြင်းမှာ စိတ်ကူးသစ်အကြံညဏ်အသစ်မဟုတ်ပါ။ ထို့အတွက် Green Shooting လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့် ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဒါဇင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိသော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများနှင့် ရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရေးအင်စတီကျူးရှင်းများ ပါဝင်သည့် Green Shooting အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပိုမိုကြာရှည်တည်တံ့သော ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုများအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) က အစိမ်းရောင်ရုပ်ရှင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (Grüner Filmpass - ယခင် Grüner Drehpass/ အစိမ်းရောင်ရိုက်ကူးမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွင် အကဲဖြတ်မှု၊ တိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတို့အတွက် တိကျသောစံသတ်မှတ်ချက်ကတ်တလောက်များပါဝင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစ၍ အထူးသဖြင့် ဂျာမန်မှငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသောဂျာမနီတွင် ထုတ်လုပ်သော ထုတ်လုပ်ရေးများသည် FFHSH ၏ ထောက်ပံ့ငွေအတွက် ဦးစားပေးအခြေအနေဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် ၎င်းကို မှုခင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ Tatort - Die goldene Zeit ( ရွှေရောင် အချိန်ကာလ) ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးစဉ်ကာလတွင် အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့ပြီး လျှစ်စစ်ဓာတ်‌အားပေးစက်များကို အသုံးမပြုခဲ့ပေ။အခြားသော ဆုအချို့ကိုဖော်ပြရလျှင် ရုပ်သံအစီအစဉ် "Verstehen Sie Spaß?"(ရယ်မြူးပျော်ရွှင်ရဲ့လား) ၊ ရုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား "Sauerkrautkoma" နှင့် Sky - ဇာတ်လမ်းတွဲ " 8 Tage" (၈ ရက်) တို့ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည့် "Die goldene Zeit" ( ရွှေရောင် အချိန်ကာလ ) အပိုင်းလည်း ပါဝင်သည့် Franziska Weisz (ဝဲ) နှင့် Woltan Wilke Möhring (ယာ) တို့ပါဝင်ထားသော Hamburg မြို့မှ NDR ရုပ်မြင်သံကြား ဇာတ်လမ်းတွဲ "Tatort" ( အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ) သည် ထုတ်လုပ်ရေးများစွာအတွက် အစိမ်းရောင်ရိုက်ကူးမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ | Foto (Detail): © NDR/Christine Schröder Baden-Württemberg ပြည်နယ် ရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, MFG) သည်လည်း ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ရန်ပုံငွေလမ်းညွှန်ချက်များတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအများအပြားသည် ရန်ပုံငွေအပေါ်တွင် မှီတည်နေရ‌သောကြောင့် ထိုအရာသည် အလားအလာရှိသော ထိရောက်သည့် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် MFG သည် KlimAktiv အေဂျင်စီနှင့် Südwestdeutschen Rundfunk ( SWR) တို့နှင့်အတူ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးများမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကို တွက်ချက်နိုင်ရန်နှင့်လျော့ချနိုင်ရန် Greenshooting CO2 တွက်ချက်စက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ "ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအဆင့်အားလုံးမှာ အနာဂါတ်တွင် ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချဖို့အတွက် အခြေခံအချက်အလက်တွေကို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများက ဖန်တီးနိုင်မယ့် လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။" ဟု SWR- ထုတ်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ Michael Becker က ပြောဆိုပါသည်။
တကိုယ်တော် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအချို့ကလည်းပဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။ ၂၀၁၉ ဆောင်းရာသီ စာသင်နှစ်ဝက်မှစတင်၍ ရေရှည်တည်တံ့သော ရုပ်ရှင်နှင့် မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးများအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူများကို အရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန် ရည်ရွယ်သော အစိမ်းရောင်အကြံပေး Green Consultant အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို Hochschule der Medien Stuttgart (မီဒီယာနှင့်ဆိုင်သောပညာရပ်များ လေ့လာနိုင်သည့်တက္ကသိုလ်) တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် မြူးနစ်မြို့ရှိ Bavaria ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုများတွင် ပို၍စိမ်းလန်း‌သောရုပ်ရှင်များကို အထူးသဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ရိုက်ကူးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတဖြစ်ဟန်ရှိသော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးရေးနေရာတွင် ဘူမိအပူစွမ်းအင်ဖြင့် အပူပေးသည်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရေအားလျှပ်စစ် နှင့် ကိုယ်ပိုင် ဆိုလာလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်မှ ရယူသည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာသည့် မီးသီးများဖြင့် အလင်းပေးသည်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးချခြင်းသည် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
Bavaria Studios ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သော ရုပ်သံအစီအစဉ် " Verstehen Sie Spaß?" ( ရယ်မြူးပျော်ရွှင်ရဲ့လား ) အတွက် အစိမ်းရောင်ရိုက်ကူးမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့၏ အစိမ်းရောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် LED စတူဒီယိုမီးလုံးများ၊ ဂေဟလျှပ်စစ်စွမ်းအင် နှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးယာဉ်များ အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်းတွင် ပလတ်စတစ်ခွက်များ လုံးဝမသုံးခြင်း စက္ကူများကိုပြန်သုံးခြင်းကဲ့သို့သော အမှိုက်များခွဲခြားစွန့်ပစ်ခြင်းများပါဝင်ပါသည်။ | Foto (Detail): © SWR/Wolfgang Breiteneicher
အဆ ၁၀၀ ဂေဟလျှပ်စစ်စွမ်းအင် နှင့် အမှိုက်များခွဲခြားစွန့်ပစ်မှု
ဝန်ကြီး Grütters သည်လည်း Green Shooting အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့်၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ။ရေရှည်တည်တံ့မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ တိုးတက်မှုနှင့် လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း ဂေဟလျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချ‌ပေးသည့်ကားများ၊ ပိုမို နည်းပါးသော ဒီဇယ်သုံးမီးစက်များနှင့်လေကြောင်းခရီး သွားလာခြင်းများ၊ စက္ကူမသုံးသောရုံးများ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော စားသောက်ပြင်ဆင်မှုများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများခွဲခြားခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာသောမီးသီးများ အသုံးပြုသည့်
ဂေဟစနစ်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ၁၀၀ခန့်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ရေရှည်တည်တံရေး အစပြုမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ကြေငြာခဲ့သည်။
ရေရှည်တည်တံ့မှုပထမခြေလှမ်းကို "Berlinale 2020" နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ချွေတာရိုက်ကူးခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းသည် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ထိုမိတ်ဆက်မှုသည် အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်လှသည်။ "Green Film Production 2.0 - Beyond reusable coffee cups" နှင့် "The Show Must Go Green" စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အစီအစဉ်များစွာပါဝင်ရုံမကပါ။ ဂေဟစနစ်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် ပွဲအခမ်းအနားကြီးများအနေဖြင့် မည်သည့်အချက်များကို လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလည်း ပွဲတော်၏ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် Berlinale ရုပ်ရှင်ပွဲ‌တော်၏ ကော်ဇောနီကို ပြန်လည်အသွင်ပြောင်းပြုပြင်ထားသည့် ငါးဖမ်းပိုက်များနှင့် အခြားနိုင်လွန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ရောက်များကိုလည်း အသုံးပြုခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
သို့သော်လည်း အရာအာလုံး လုံးဝဥဿုံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းမျိုး မဟုတ်သေးပါ။ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း‌အနေဖြင့် တခြားနယ်ပယ်များကဲ့သို့ပင်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို အချိန်လွန်မှ တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသော စီမံဆောင်ရွက်ချက် အစီအစဉ်များဖြင့် ပဏာမဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သီးခြားကြေညာချက်များ ထွက်ပေါ်လာကြသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဆောင်ရွက်ချက်သည် ရေရှည်တွင် ကြာရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲများကို ဦးတည်ခြင်းရှိ မရှိကို လာမည့်နှစ်များအတွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်လာလိမ့်မည်။
Lucad Barwenczik သည် အလွတ်တန်းဝေဖန်ရေးဆရာ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် "Filmdienst"၊ "Kino-Zeit" နှင့် "Culturmag" တို့တွင် ရုပ်ရုပ်ရုံ နှင့် ရုပ်ရှင်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများအကြောင်း ရေးသားသည်။
ဘာသာပြန် : ခင်မောင်ဇင်
မူပိုင်ခွင့် : Text: Goethe-Institut, Lucas Barwenczik. Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.